"Calculated" ဘယ်သူ အမြတ်ထွက်သွားတယ် ထင်ကြသလဲ ... - Barnyar Barnyar
ခင်ဗျားက တကယ် လုပ်တော့မှာလား … စဉ်းစားပါဦး ကိုယ့်မှာလည်း ငဲ့ရမယ့်သူတွေနဲ့ ငါချမယ် ဒီကောင့်ကို သည်းခံပေါင်း များနေပြီ … လုပ်ကိုလုပ်မှာ ကြည့်လုပ်ဟိုကောင်က လူမိုက်နော် ပြန်လုပ်ရင် ဆရာ နာလိမ့်မယ် … မလုပ်လို့ ခံနေရမှာလားကွ ငါ့မှာလည်း ခြေနဲ့လက်နဲ့ လူကွ လူ လူ …
ရပ်ကျော်ရွာကျော် လူမိုက် တပည့်တပန်းတွေနဲ့ ပွကြီးလူမိုက်ကို မကျေနပ်လို့ သွားရိုက်မလို့တဲ့ ဘေးက စိတ်ပူတော့ တားကြတာလေ မရဘူး … ဒီကောင် တအားကြွနေပြီ တားမရလည်း ထားလိုက်ပေါ့ …
အရပ်ထဲက လူဖလံ ဖြူနွဲ့နွဲ့ ကျောင်းဆရာက ငါ့ကိုရိုက်မလို့ ဆိုပါလား … ငါလုပ်ရင် တချက်ထဲနဲ့ သေမယ့်ကောင်က ဘယ်လိုတွေ သွေးကြွနေတယ် မသိဘူး …
သူ့ကို ငါက လောက်လောက်လားလား စော်ကားတာလည်း မရှိပါဘူး … သူ့ခွေးကို ရိုက်လိုက်တာလေးများ သူခုလောက် ဖြစ်သတဲ့လား ကျောင်းဆရာ တယ်ခက်ပါလား …
ကျောင်းဆရာအကြောင်း ကြားပြီးပြီလား… ဘာတုန်းဟ … ပွကြီးကို မကျေနပ်လို့ သွားရိုက်ဖို့ သံတုတ်နဲ့ သွားတာ ဟိုက လုပ်လွှတ်လို့ သေသတဲ့လား…
ဘယ်က သေရမတုန်း ပွကြီးက သူမှားတာရှိရင် ကျေပါဆိုပြီး တောင်းပန်သတဲ့ သူတပည့် လူမိုက်တွေနဲ့ အိမ်ထိ ပြန်လိုက် ပို့တာဆိုပဲ … ဟာ ! တယ်ဟုတ်ပါလား ကျောင်းဆရာ စွမ်းသားပဲ…
ဆရာကြီးညံ့သဗျာ … ဒီလူဖလံလေးကိုများ တောင်းပန်စရာလား … ခွေးပစ်တဲ့ ဒုတ်လောက်ရှိတာကို … တိတ်တိတ်နေကြစမ်းကွာ …
ဒီလိုလူက ငါလိုကောင်ကို မကျေနပ်လို့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ချမယ်ဆိုတာကို မလေးစားလို့ ဖြစ်မလားကွ သူ့မှာမိသားစုနဲ့ ငဲ့စရာတွေနဲ့ ဟာကို လာရဲတာ သတ္တိမဟုတ်ဖူးလား ကျောင်းဆရာကို ငါတောင်းပန်လိုက်တော့ ဘာဖြစ်လည်း အရပ်က ငါတို့ဟာ ဆိုးမိုက်နေကြပေသိ အနိုင်မကျင့်ဘူး မယုတ်မာဘူးလို့ ပြောကြလိမ့်မယ်ကွ
ဆရာ့သတ္တိကို ကျောင်းသားတွေလည်း သိသွားကြရင် သူလည်းစာသင်လို့ ပိုကောင်းလိမ့်မယ်
ငါတို့ကိုလည်း ရပ်ရွာက အမုန်းမဖက်တော့ဘူးဟ ဟိုဖက်ရွာ သွားတိုက်ချင်ရင်တောင် လိုအပ်ရင် နောက်ကအကူလိုက်ကြဦးမှာ ငတုံးရ
Credit to Pi Lon
“Calculated” ဘယျသူ အမွတျထှကျသှားတယျ ထငျကွသလဲ …
ခငျဗြားက တကယျ လုပျတော့မှာလား … စဉျးစားပါဦး ကိုယျ့မှာလညျး ငဲ့ရမယျ့သူတှနေဲ့ ငါခမြယျ ဒီကောငျ့ကို သညျးခံပေါငျး မြားနပွေီ … လုပျကိုလုပျမှာ ကွညျ့လုပျဟိုကောငျက လူမိုကျနျော ပွနျလုပျရငျ ဆရာ နာလိမျ့မယျ … မလုပျလို့ ခံနရေမှာလားကှ ငါ့မှာလညျး ခွနေဲ့လကျနဲ့ လူကှ လူ လူ …
ရပျကြျောရှာကြျော လူမိုကျ တပညျ့တပနျးတှနေဲ့ ပှကွီးလူမိုကျကို မကနြေပျလို့ သှားရိုကျမလို့တဲ့ ဘေးက စိတျပူတော့ တားကွတာလေ မရဘူး … ဒီကောငျ တအားကွှနပွေီ တားမရလညျး ထားလိုကျပေါ့ …
အရပျထဲက လူဖလံ ဖွူနှဲ့နှဲ့ ကြောငျးဆရာက ငါ့ကိုရိုကျမလို့ ဆိုပါလား … ငါလုပျရငျ တခကျြထဲနဲ့ သမေယျ့ကောငျက ဘယျလိုတှေ သှေးကွှနတေယျ မသိဘူး …
သူ့ကို ငါက လောကျလောကျလားလား စျောကားတာလညျး မရှိပါဘူး … သူ့ခှေးကို ရိုကျလိုကျတာလေးမြား သူခုလောကျ ဖွဈသတဲ့လား ကြောငျးဆရာ တယျခကျပါလား …
ကြောငျးဆရာအကွောငျး ကွားပွီးပွီလား… ဘာတုနျးဟ … ပှကွီးကို မကနြေပျလို့ သှားရိုကျဖို့ သံတုတျနဲ့ သှားတာ ဟိုက လုပျလှတျလို့ သသေတဲ့လား…
ဘယျက သရေမတုနျး ပှကွီးက သူမှားတာရှိရငျ ကပြေါဆိုပွီး တောငျးပနျသတဲ့ သူတပညျ့ လူမိုကျတှနေဲ့ အိမျထိ ပွနျလိုကျ ပို့တာဆိုပဲ … ဟာ ! တယျဟုတျပါလား ကြောငျးဆရာ စှမျးသားပဲ…
ဆရာကွီးညံ့သဗြာ … ဒီလူဖလံလေးကိုမြား တောငျးပနျစရာလား … ခှေးပဈတဲ့ ဒုတျလောကျရှိတာကို … တိတျတိတျနကွေစမျးကှာ …
ဒီလိုလူက ငါလိုကောငျကို မကနြေပျလို့ ဖွဈခငျြရာဖွဈ ခမြယျဆိုတာကို မလေးစားလို့ ဖွဈမလားကှ သူ့မှာမိသားစုနဲ့ ငဲ့စရာတှနေဲ့ ဟာကို လာရဲတာ သတ်တိမဟုတျဖူးလား ကြောငျးဆရာကို ငါတောငျးပနျလိုကျတော့ ဘာဖွဈလညျး အရပျက ငါတို့ဟာ ဆိုးမိုကျနကွေပသေိ အနိုငျမကငျြ့ဘူး မယုတျမာဘူးလို့ ပွောကွလိမျ့မယျကှ
ဆရာ့သတ်တိကို ကြောငျးသားတှလေညျး သိသှားကွရငျ သူလညျးစာသငျလို့ ပိုကောငျးလိမျ့မယျ
ငါတို့ကိုလညျး ရပျရှာက အမုနျးမဖကျတော့ဘူးဟ ဟိုဖကျရှာ သှားတိုကျခငျြရငျတောငျ လိုအပျရငျ နောကျကအကူလိုကျကွဦးမှာ ငတုံးရ